Warbixin Kooban Iyo Hayaanka Geediga Somaliland | Marsa News
Warbixin Kooban Iyo Hayaanka Geediga Somaliland
March 3, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Somaliland waxay ku taala geeska Afrika, dhinaca Waqooyi galbeed waxa ka xigay deris la tahay dalka Jamhuuriyada Jabouti, galbeedna waxaa ka xiga Ethiopia, barina waxaa ka xiga somalia. Tirada dadka Somalilad waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad afar malyan iy badh.
Baaxadda dhulka ay ku fadhido Somaliland waa 139,000 km2. Somaliland waxaa dhinaca waqooyiga ka xiga badda cas oo ku fadhida xeeb dhererkodu yahay 908 km2.
Somaliland oo leh taariikh aad u balaadhan, Waxay ka mid tahay meelahii ugu horrayay ee ay ka hana qaaday ilbaxnimadu, Dadka taariikhda ku xeeldheeri waxay sheegaan in farraaciintii hore asalkoodu Somali ka soo jeedaan, Deganaana jireen dhulka xeebaha badda cas, taasoo markii danbana ay xidhiidh qoto dheer la lahaayeen Somaliland. Waxaana xaddaaradda Somaliland ku simantahay ilaa 7000 sanadood ciise hortii.
Somaliland waxey ka mid aheyd wadamadii xiliyada qaar uu ka arimin jiray gamystihii Ingiriisku, waxeyna xornimaddeedii ka qaadatey 26-kii Juun 1960 afar maalmood ka dib waxay la midowday Soomaliya oo Talyaanigu guumeysan jiray.
Midawgaasi somaliland iyo shacbigeedu may mahadinin, oo waxay ka dhaxleen, dil, dhac, burbur, gumaad, iyo xasuuq, aan loo kala aaboyeelin caruur iyo ciroolaba, dad iyo duunyaba waxa lala beegsaday madaafiic iyo diyaarado duqaynayay magaalooyinkii ay ka soo kacayeen.
In ka badan 10 sano oo halgan hubaysan oo ay hogaaminayeen xoogagii jabhaddii SNM ka dib, waxgaradka, siyaasiyiinta, aqoonyahanka iyo hormuudka bulshada Somaliland waxay ku heshiiyeen 18kii May in ay la soo noqdaan xorriyadii luntay 26kii June 1960.
18ka May waa maalin ku suntan taariikhda Somaliland. Waa maalin jiilashii hore u ah xusuus, jiilasha danbena dhiirigelin iyo rajo. Waa maalin ay ka badbaaday Somaliland in ay markale ku dhacdo god madow.
Somaliland oo haatan 29 jirsatay waxa mayalka u soo qabtay oo hogaaminta talada dalka isaga danbeeyay shan madaxwayne oo mid kastaaba rabitaanka shacbigiisa ugu soo shaqeeyay kadibna sida qori isu dhiibka xilka isugu wareejiyay.
Somaliland waxa ay leedahay cudud ciidan oo iska caabiyi karaya cidii wal ee ku soo duusha, shacbiwaynaha reer somaliland ayaa ah kuwo saacad kasta hareera taagan ciidamadooda naf hurka leh, ee heeganka ugu jira difaaca qarankooda.
Hayaanka geediga horumarka dalka ayaa ah mid si xawli ah u socda, oo shacbi waynaha somaliland ay yihiiin ku qaaday dhabihii run ku sii duruga kuwaas oo hiigsi ugu jira ka mid noqoshada dunida horumartay.
Somaliland waxa ay halkaasi ku soo gaadhay wada tashi iyo isu tanaasul, xaajo wal oo cakirantaba lagu dhameeyo miiska wada hadalka dushiisa, taasi oo ah sunaha nolosha shacbiga reer somaliland iyo tiirarka adag ee qarankan dhidibada aastay ee aan elle mooye cid kale u baahnayn.